Nhau - Izvo Zvakanakira zveLaminated Girazi
Izvo Zvakanakira zveLaminated Girazi
Zvinoreva kutevedzera zviyero zvemunyika zvegirazi rakaomeswa, girazi rakadzikama, uye girazi rakadzika rakagadzirwa kubva kwavari. Pakati peizvi, iko kushanda kwese kwegirazi rakamisikidzwa uye girazi rakakomberedzwa rakagadzirwa negirazi rakamisikidzwa ndiyo yakanakisa. Mudzimba dzemazuva ano, iko kurira kwekusimbisa kwakanaka, uye chave chimwe chezvinhu zvakakosha kuti vanhu vapime mhando yedzimba.
Laminated girazi ine PVB interlayer inogona kuvhara mafungu ezwi uye kuchengetedza runyararo uye kugadzikana hofisi nharaunda. Yayo yakasarudzika UV-kusefa basa kwete chete inochengetedza ganda revanhu hutano, asi zvakare inosunungura yakakosha fenicha, kuratidza zvigadzirwa, nezvimwe kumba. Izvo zvinoderedzawo kufambiswa kwezuva uye kunoderedza kutonhora kwesimba rekushandisa.
Zvakanakira zvakawanda zvegirazi rakarongedzwa zvinogona zvakare kuve nezvisingatarisirwe uye zvakanaka mhedzisiro yekushongedza imba. Iyo girazi revanhu rakapfava girazi ndiyo girazi rakajairwa kuburikidza nehurongwa hwekurapa kupisa, simba rayo rakawedzerwa ka3-5, rinogona kumira imwe simba kubva kunesimba rekunze kana tembiricha shanduko isina kutyoka, kunyangwe yakaputsika, asi zvakare girazi rose yakatsemurwa kuita zinga rouchi-yakaita sevhavha zvidimbu zvidiki Hazvisi nyore kukuvadza vanhu uye nekudaro ine imwe nhanho yekuchengeteka.
Girazi rakadzikama harigone kutemwa. Inoda kutemwa kusvika pahukuru isati yatsamwa uye iine "kuzvidzora" maitiro. Zvinoenderana nekushandisa kwakasiyana, girazi rakadzikama rinogona kuganhurirwa mumhando dzakasiyana dzegirazi rakadzikama, girazi rine hunyoro, girazi rakadzora rematunhu, girazi rakadzikama, girazi rakamonyoroka rakadaro uye zvichingodaro. Semuenzaniso, mazhinji madhoo emhuri, kusanganisira madhoo ekicheni, akagadzirwa negirazi rine chando. Mhepo iri mukicheni inowanzo kuunganidzwa pamusoro kana uchibika, uye kana ukashandisa girazi rakaomeswa pachinzvimbo, hauzove nedambudziko iri. Nenzira imwecheteyo, iyo hombe girazi kupatsanura mumba ingangova njodzi yekuchengetedza kune vana vanowanzoita basa. Kana girazi rakamisikidzwa rikashandiswa, vabereki vanogona kurerukirwa. Kunyangwe kana girazi rikatsemuka, zvidimbu uye zvidimbu zvakapinza zvinoramba zvakanamatira kune firimu repakati.
Girazi re LED rinonziwo girazi remagetsi. Simba Girazi mubatanidzwa wakakwana weiyo mwenje sosi uye girazi, uye inotyora kuburikidza neyechinyakare pfungwa yekuvaka yekushongedza zvinhu. Inogona kugadzirwa pamberi mugirazi remukati dhizaini, uye gare gare kuburikidza neiyo DMX ese-edhijitari njere tekinoroji kuti uwane shanduko dzinodzora, yemahara kudzora kweiyo mwenje sosi kupenya uye shanduko. Mukati, waya dzakanyatsojeka dzinoshandiswa, dzinosiyaniswa newaya dzakajairika uye hadzioni chero mitsara pamusoro pegirazi. Mushure mekurapwa kwakakosha padanho rekupedzisira, zvese zvehunyanzvi zvinodiwa uye zvekuchengetedza zvinodiwa zvasvika kune yenyika inoenderana chitupa. mureza.